Sababta Indonesia ka dhigtay mid u nugul dhulgariirada iyo Tsunamiga? – Bandhiga
Indonesia waa mid u nugul dhulgariirada, waxaana sabab u ah taasi halka ay dhulka kaga taallo oo loo yaqaan “Ring of Fire” waa dhul ballaaran oo ay ku badan yihiin faalkanada, waana halka ay inta badan ka dhacaan dhulgariirada ugu badan ee caalamka.
Allison Chinchar oo ah wariye arrimaha saadaasha hawada ayaa qaba in isbadalka ku socda dhulka loo yaqaan “Ring of Fire” loo tiirin karo dhulgariirada iyo Tsunamiga ka dhaca dalkaasi.
Indonesia oo ah jasiiradda ugu weyn caalamka ayaa celcelis ahaan waxaa ugu yaraan bishii ka dhaca musiibo dabiici ah tan iyo Tsunamigii sanadkii 2004. Waxay u badan yihiin dhacdooyinka dhulgariirada Tsunamiga, qaraxyada faalkaanaha iyo dhacdooyin kale oo ka dhasha isbadalka cimilada.
Dadka ka badbaaday duufaantii habeenkii sabtida ku dhufatay wadanka Indonesia ayaa ka baqdin qaba in ay soo rogaal celiso duufaanta Tsunami oo ay ku dhinteen 430 ruux.
Wararkii ugu dambeeyayee laga helayo dalka Indoneisa waxa ay sheegayaan in Shacabka ku nool tuulada Sukaraja in ay ku soo kaceen dhawaqa daadad xoogan oo ka soo fatahay badda waxaana ay qaarkood u carareen dhanka buuraha si ay uga badbaadaan.
Mid ka mid ah haweenka degan aagaas ayaa tiri “waan ogaa in ay tahay Tsunami waxaan ku orday wadada hormarta gurigeyga ee aada buuraha mana heysan waxkale marka laga reebo dharka aan xirnaa”
Haweeneydaan ayaa intaa ku dartay in dadka qaarkood ay la soo tageen caruurta iyaga oo abaaray buurta Rajabasa.
Dhanka kale waxaa isla habeenkaas dad badan ay ku hoydeen geedaha hoostooda waxaana socday roob xoogan
Si kastaba ha ahaatee duufaanta xooganeyd ee Tsunami ee ku dhufatay gobolada Lampung iyo Banten ayaa waxaa ku dhintay 430 ruux sida ay xaqiijisay dowlada Indonesia.